Izindaba - inkampani ye-3LTEX ibambe iqhaza embukisweni wezohwebo wamazwe omhlaba weTechtextile-Leading wezindwangu zobuchwepheshe kanye nama-nonwovens
Inkampani ye-3LTEX ibambe iqhaza embukisweni wokuhweba wamazwe omhlaba weTechtextile-Leading wezindwangu zobuchwepheshe kanye nama-nonwovens
Njalo ngonyaka, inkampani ye-3ltex izobamba iqhaza emibukisweni emikhulu yaseChina nakwamanye amazwe ehlobene nama-techtextils, ukuphepha kanye nempilo.
I-Techtextil umbukiso wezokuhwebelana wamazwe omhlaba ohamba phambili wezindwangu zobuchwepheshe kanye nama-nonwovens, izokwethula yonke imikhakha yezindwangu zobuchwepheshe, izindwangu ezisebenzayo nezindwangu ku-Techtextil. Ama-SmartTextiles - noma izinto ezihlakaniphile - zithatha umhlaba wezindwangu ngesiphepho nabaholi bemboni abanjengo-3L benza imikhiqizo emisha engahle iguqule imboni.
Idokodo le-3Ltex (umklami wakamuva nomkhiqizi we-techtextiles) lethule izitayela zase-China embonini yezindwangu zobuchwepheshe.Funda kabanzi mayelana nentambo ehlakaniphile yenkampani yakwa-3ltex, izindwangu nokunye okusha lapha.
I-3LTEX ilungiswe ngokucophelela, ngamakhono wokuthuthukisa umkhiqizo oqinile kanye namazinga ezobuchwepheshe amahle kakhulu, imicu yethu ehlakaniphile esebenza kahle nezindwangu ezihlakaniphile ziphinde zaba yinto evelele embonini.
Idizayini ehlakaniphile nenhlanganisela yemisebenzi eminingi yokuvimbela umlilo, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba ukushisa, ukuqhuba ngogesi, ama-antibacterial kanye ne-antistatic kudonse abathengi abaningi abangahle bame, babuke futhi baxoxisane.
Amakhasimende amaningi alethe izinkinga zobuchwepheshe ezihlangabezane nazo ngenkathi kucutshungulwa. Ngemuva kokuqondiswa kwezobuchwepheshe nenqubo yokwenza kahle konjiniyela abasezingeni eliphakeme be-3LTEX, amakhasimende amaningi anelisekile kakhulu futhi inhloso yokuthenga ifinyelelwa khona lapho.
Leli yidili lomkhakha, kodwa futhi nohambo lokuvuna. Kulo mbukiso, sibuyise ama-oda amaningi nemibono ebalulekile evela kubasebenzisi bokugcina nabangane abenza umthengisi.
Eminyakeni yamuva nje, i-3LTEX izuze ukuthuthukiswa okuvundlile nokuqondile ku-smart yarn nezimboni zendwangu ehlakaniphile, ngempumelelo enkulu, ukuqoqwa komkhiqizo othile nentuthuko engaguquki.
Ngamakhono amahle wokusebenza emakethe, sesivele sithathe isikhundla esibalulekile emkhakheni wezintambo ezihlakaniphile nezindwangu ezihlakaniphile.
Noma kunjalo, siyazi ukuthi "kusekude ukuhamba."
Sizophinda futhi siqhubeke nokwenza ngcono uhlelo lokuphatha, sisheshise inqubo yokwakhiwa komkhiqizo okungu-3L, ngokufanele sibhekane nesidingo semakethe, futhi senze imikhiqizo esezingeni eliphakeme yokusiza iningi labasebenzisi nabangane.